Frantsa, Amerika, Afrika: Ny Loka “Y’a Bon” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Jona 2017 4:37 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Italiano, Nederlands, বাংলা, bahasa Indonesia, English
(Marihina fa tamin'ny 30 Martsa 2009 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Sary avy amin'ny that_james, nampiasàna Lisansa Creative Commons . Tsidiho ny that_james’ flickr photostream.
Sôkôla vovony malaza vita frantsay ary nanomboka hita tao Frantsa tamin'ny taona 1912 ny “Banania”. Ny hanafangaro ity vokatra ity (vita avy amin'ny sôkôlà, akondro, ronono ary siramamy) amin'i Afrika na i Karaiba, mba hanaovana azy miavaka kokoa ny tetikadin'ny haivarotra tamin'izany fotoana .
Tamin'ny taona 1915, nandritra ny Ady Lehibe Voalohany , niady ho an'ny tanindrazany ireo miaramila tao Afrika avy any amin'ny zanatany frantsay. Izany no fiandohan'ny fifandraisana naharitra teo amin'ny marika sy ny endriky ny Tirailleur Sénégalais . Tamin'izany fotoana izany, fantatra hatraiza hatraiza tao Frantsa i Senegal mba hanaovana ity vokatra ity ho “miavaka” izay nafarana avy any Nikaragoà tany am-boalohany. Niaraka tamin'ny teny filamatra izay malaza ankehitriny hoe: “Y'a Bon” ny sarin'ity miaramila avy any Afrika falifaly sy mitsiky ity mba hiady ho an'i Frantsa nandritra ny ady. Efa nandritra ny taona maro (azo inoana fa hatramin'ny taompolo 1970) no nampifandraisina tamin'ilay miaramila Senegaly mba hampiavaka ny mariky ny vokatra ity andian-teny izay lazaina fa manana endrika teny frantsay hafahafa ary ampiasain'ny Afrikana mba hilazana ny teny Frantsay hoe “C'est bon” izy ity .
Sary avy amin'ny just.Luc, nampiasàna Lisansa Creative Commons . Tsidiho ny just.Luc's flickr photostream.
Tamin'ny taona 2005, namoaka bilaogin-dahatsoratra [Fr] mitondra ny lohateny hoe “Y'a Bon Banania ou Y'a Pas Bon Banania” ilay bilaogera Alain Mabanckou momba ny fitarainan'ny vondrona Goadelopeana, Martinikana sy Reinioney antsoina hoe Collectif DOM , izay nitory ny Nutrimaine, orinasa mpamokatra ny Banania noho ny…
… fampiasana ny sary manevateva ny olona mainty hoditra , ​​amin'ny alalan'ny fitrandrahana ny endriky ny miaramila Senegaly sy ny teny filamatra malaza “Banania Y'a Bon”, izay noforonina tany amin'ny fiandohan'ny taonjato faha-20 …
Tamin'ny taona 2008, nitory ny Nutrimaine indray ny vondrona iray hafa, le MRAP [Fr] ( Hetsika Manohitra ny Fanavakavaham-bolokoditra sy ho an'ny Fifankazahoan'ny Vahoaka ) noho ny tsy fanajana ny fifanarahana voasonia tamin'ny taona 2006 niaraka tamin'ny Collectif DOM, taorian'ny fiampangana ny orinasa. Tsy nahazo rariny ny MRAP [Fr] araka ny bilaogera Storytelling, …
noho ny zava-misy fa tsy manelingelina ny filaminam-bahoaka na mifanohitra amin'ny fomba ara-dalàna ity teny filamatra ity.
Sary avy amin'ny ɐılnɾ, nampiasàna Lisansa Creative Commons . Tsidiho ny ɐılnɾ's flickr photostream.
Ankehitriny, mampiasa karazana endrika sariitatra ho toy ny sary famantarana ny Banania ary tsy hita intsony ilay teny filamatra nampiady hevitra, kanefa tsy mbola nihavana tamin'ny marika ny ankamaroan'ny olona mainty hoditra tao Frantsa . Tamin'ny 17 Martsa 2009, nanomboka ny “Loka Y'a Bon ” ny vondrona antsoina hoe les Indivisibles [Fr] , fanomezam-boninahitra iray hafa kely, izay natolotra ho an'ireo mpanao politika, mpanao gazety, sy mpiasam-panjakana izay nandray anjara tamin'ny fanelezana ny fanavakavaham-bolokoditra tao Frantsa. Namoaka ny rohy mankany amin'ny lisitr'ireo olona nahazo ny ” Loka Y'a Bon ” rehetra i Montray Kreyol [Fr] , ary azonao arahina ao amin'ny pejy flickr Fiheveran-diso ny Foko just.Luc ireo fanehoan-kevitra bebe kokoa momba ity dokambarotra nanavatsava ny taonjato ity.